Ogaden News Agency (ONA) – warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Dagaal Xoogan oo ka Dhacay Maroodiley
warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Dagaal Xoogan oo ka Dhacay Maroodiley
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ayaa ka warbixiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee CWXO ay ku qaadeen cadawga. Dagaaladan oo ah kuwo weeraro iyo kamiino ay CWXO u dhigayaan kuwa gumaysiga ayaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare laxaad leh oo naf iyo maalba leh. Dagaaladan ugu dambeeyay een helnay warbixintooda ayaa waxay u dhaceen sidan.
14/2/15 Geesdheere oo Tuulada Qamuuda ee Gobolka Doollo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka daalan ee gumaysiga lagaga dilay inta lahubo 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/2/15 Baliwariir oo Dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh oo aan lasoo faahfaahinin.
16/2/15 Yucub oo Gobolka Doollo katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay weerar ku qaadeen kolanyo ciidanka cadawga ah oo halkaas marayay waxayna gaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/2/15 Maroodilay oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal aad u xoog badan oo ay isku farasaareen CWXO iyo huubada Ogadenia lagu soo uruuriyay ee Wayaanaha ayaa looga golroonaaday ciidankii cadawga.
Dagaalkan oo ahaa mid ay CWXO sifiican u qorseeyeen ayaa ciidankii Wayaana laga dhigay qaar goobta ku bakhtiyay iyo qaar la dhaawacay. Waxaa weli sugaynaa faahfaahinta rasmiga ah ee dagaalkan Maroodilay kadhacay.
Hasa ahaatee dad kusugan magaalada Qabridahare ayaa ku waramaya in ay ilaa shalay arkayeen bakhtiga iyo dhaawaca ciidanka gumaysiga oo magaalada lakeenayo iyo waliba oohinta kabaxaysa ciidanka cadawga ee ku sugan magaalada Qabridahare.